Ergayga Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Oo La Kulmay Bulshada Baledweyne * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ergayga Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Oo La Kulmay Bulshada Baledweyne
Baledweyne, Mareeg.com: Ergayaga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaaliya danjire Nicholas Kay oo maanta gaaray magaalada Beledweyne ayaa kulamo kala duwan la qaatay qeybaha bulshada magaalada.
Xerada Ceel-jaalle ayuu kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka AMISOM. Kulanka ayaa looga hadlay arrimo la xiriira ammaanka iyo howlgallada ciidanka AMISOM ee gobolka Hiiraan.
Danjire Kay ayaa u sheegay waxgaradka iyo maamulka gobolka Hiiraan in ujeedada socdaalkiisu la xiriirto sidii uu wax badan uga ogaan lahaa xaaladaha kala duwan ee ka jira magaalada Beledweyne sida ammniga iyo barnaamijyada hormarineed ee loo baahan yahay in wax badan laga qabo.
Ergayga Qaramada Midoobay danjire Kay ayaa ka dhageystay odayaasah gobolka Hiiraan ka dhageystay talooyin iyo waxyaabo ay doonayaan in gobolkooda loo qabto.
Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada ayaa ka codsaday Qaramada Midoobay inay gacan ka geysato sidii deegaannada gobolka ee wali gacanta ugu jira Al-Shabaab loo saari lahaa.
Nicholas Kay ayaa ku boorriyay qeybaha bulshada inay ka shaqeeyaan nabadda, isagoo ballan-qaaday inuu tixgelin doono codsiyada loo jeediyay.
“Dhamaan wixii xog ahaan ee aad soo gudbiseen iyaga oo qoraal ah ayaan u gudbin doonaa dowladda dhexe si markaa ficil loogu badallo,’’ ayuu yiri Nicholas Kay oo la hadllayay qeybaha bulshada uu kulanka la qaatay.
Maamulka gobollka Hiiraan iyo ciidamada Jabuuti ee howlgalka midowgga Afrika AMISOM ayuu sheegay in ay shaqo weyn ka qabteen nabad-galyada, gaar ahaan waxaa uu ku amaanay ciidamada Jabuuti tababaradii kala duwanaa oo ay siiyeen ciidamada maamulka oo wax badan ku guuleystay in ay wax ka qabtaan ammniga.
“Waan hambalyeeynayaa shaqada weyn oo ay qabteen mas’uuliyiinta maamulka iyo ciidamada Jabuuti oo iskaashanaya, gaar ahaan is-badalka ay ka sameeyeen dhinaca ammniga,’’ ayuu yiri Nicholas Kay.
Waxaa uu ka dhawaajiyay oo uu sheegay in wixii hadda ka danbeeyay si rasmi ah looga hergalin doono magaalada Beledweyne xafiiska UNSOM oo kala shaqeyn doona bulshada ku dhaqan magaalada sida uu sheegay xiriirka Qaramada Madoobay.
Abaanduulaha ciidamada AMISOM Jen Cismaan Subaglle oo ka hadllay kulanka ayaa sheegay in ciidamada Jabuuti aysan u iman sida uu hadalka u dhigay magaalada Beledweyne in ay iska fadhiyaan, hasse ahaatee qorsheynayaan sidii ay u gaari lahaayeen qeybaha kale ee gobolku ka kooban yahay.
Waxaa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalladii ugu danbeeyay ee ka dhacay deegaannka Kabxaley ee gobolka Hiiraan, isaga oo ka dalbaday odayaasha dhaqanka in ay xal deg deg ah ka gaaraan khilaafka labada dhinac.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa sheegay dhinaciisa in wixii macluumaad ah ama xog uu si qoraal ah ugu gudbiyay ergeyga gaar ah ee QM Nicholas Kay isaga oo intaa ku darray in soo jeedinta odayaasha iyo xogtii uu gudbiyay ay waafaqsanaayeen.
“Waxaan ku farsaxay in soo jeedintii odayaasha iyo waxgaradka iyo xogtii aan u gudbiyay ergeyga gaar ah ee QM ahaayeen kuwo is waafaqsan,’’ ayuu yiri Cabdi Faarax Laqanyo.
Safarka Nicholas Kay ee magaalada Beledweyne ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku tago gobollada dhexe Soomaaliya, isaga oo horay u booqday magaalada Baydhabo iyo deegaannada ka tirsan maamul gobolleedka Puntland.
Xilligii duhurka ayuu wafdiga Nicholas Kay dib ugu laabtay magaalada Muqdisho oo markii hore uu ka kicitimay.
Kaaliyaha Xog-hayaha Arrimaha Debadda Mareykanka Ee Afrika Oo Tagtay Muqdisho
Madaxweynaha Somaliland Iyo Madaxa UNDP Somalia Oo Ku Kulmay Hargeysa